महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा माधव समूहलाई भित्र्याउने ओलीको तयारी, को को बन्दैछन् मन्त्री ? - News20 Media
June 7, 2021 N20LeaveaComment on महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा माधव समूहलाई भित्र्याउने ओलीको तयारी, को को बन्दैछन् मन्त्री ?
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा एमालेकै माधव समूहका नेतालाई पनि सरकारमा ल्यान लागेका छन् । गएराति पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा खनाल–नेपाल समूहलाई भित्र्याउने तयारी गरेका हुन्।
कार्यदलमा भएको सहमति अनुसार नै प्रधानमन्त्री ओली जेठ २ मा फर्किन सहमत भएकाले अब मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन लागिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए।
नेम्बाङ भन्छन्, ‘पार्टी जेठ २ मा फर्किने भनिसकेपछि यो समूह र त्यो समूह भन्ने कुरै भएन। खाली रहेका मन्त्रालयमा पार्टीका नेतालाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्नुभएको छ। खाली रहेका मन्त्रालयले एक दुई दिनभित्रै पूर्णता पाउँछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री तथा पार्टीबाटै समेत गरी गत शुक्रबार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले गृह, रक्षा, सूचना तथा सञ्चारसहित ७ मन्त्रालय मन्त्रालय आफू मातहतमा राखेका छन्। ती मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल–नेपाल समूहका नेतालाई ल्याउने तयारी गरेका बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ।
यद्यपि, असन्तुष्ट पक्षले भने जेठ २ मा फर्किने प्रधानमन्त्री ओलीको विज्ञप्ति प्रति आशंका जनाएको छ। जेठ २ मै फर्किने प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्ताव मै आशंका रहेकाले मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा आफ्नो पक्षको सहभागिता निकै परको विषय भएको खनाल–नेपाल समूहको भनाइ छ।
माधव समूहका नेताहरुमा को को मन्त्री बन्ने भन्नेबारे केही पनि खुलेको छैन् ।
एमालेमा अर्को बबण्डरः मन्त्रीबाट हटाए लगत्तै ईश्वर पोखरेलले छाडे प्रधानमन्त्री ओलीको साथ
पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन ओली तयार, आन्तरिक परामर्शमा नेपाल समूह